कश्मीर : ईदको कसलाई चिन्ता छ? परिवारजनको अवस्था थाहा पाउनुछ – Dcnepal
प्रकाशित : २०७६ साउन २६ गते १९:४९
नयाँ दिल्ली (बीबीसी) । सेतो बादलको बीचबाट उडिरेको विमान तल झर्दा झ्यालबाट हेर्दा आँखाले जहाँसम्म देख्न सक्छ, त्यहाँसम्म हरियाली देखिन्छ । रुखहरुबाट घेरिएको पहाड, घर, खेत, खाली सडकहरु । आकाशबाट हेर्दा शान्त लाग्छ, विल्कुल शान्त ।
उनी भन्छन्, ‘बन्दुकको नालमा सरकार जे पनि गर्न सक्छ । जमीन हत्याउन सक्छ । जो यहाँ भइरहेको छ, सबै बन्दुकको भरमा भइरहेको छ । यो जमीन हत्याउन त सक्छन् । किन्न सक्दैनन् । तर, यो भारतका आम मानिसहरुका लागि गरिएको होइन । ती ठूला मानिसहरुका लागि गरिएको छ, जसको पैसाले भारत सरकार चल्छ । यसमा न कश्मीरीका लागि केही छ न आम भारतीयहरुका लागि ।’ बीबीसी हिन्दीबाट अुवाद
One thought on “कश्मीर : ईदको कसलाई चिन्ता छ? परिवारजनको अवस्था थाहा पाउनुछ”
The Most Inexpensive Cialis Perlutex Acquistare Kamagra Thailandia online pharmacy Prix De Cialis En France Priligy Meinungen Propecia Descargar